Edepụtara Redmi 10X na Google Play Console | Gam akporosis
Mgbe ụfọdụ anya na-adịghị anya, aha nke Redmi 10X ọ dị ka enwetala ike ịbụ ngwaọrụ ọzọ nke ika ahụ. Ugbu a ekwentị a apụtala Google Play njikwa na-egosi nkọwa ya niile n'ụzọ zuru ezu ma bụrụkwa nke mbụ na-ebute etiti etiti.
El Redmi 10X Ọ bụ ihe ọ bụla karịa Redmi Note 9 a ma ama maka ahịa ndị China, n'agbanyeghị nke a, ọ na-eweta ọdịiche dị n'akụkụ ụfọdụ ga-eme ka ọ bụrụ nhọrọ na-atọ ụtọ. Na Google Play console ọ na-egosi akara ngosi M2003J15SI, ọ bụ otu ọnụ ọgụgụ ahụ gafere site na nchekwa data China Telecom.
1 Redmi 10X nkọwa ndị mbụ gosipụtara
2 Ka ekwuwapụta n’isi nso
Redmi 10X nkọwa ndị mbụ gosipụtara
El Redmi 10X ga-etinye nhazi nke ekwuputara na izu nke abụọ nke Jenụwarị, Helio G70 sitere na MediaTek, SoC nke nwere ike ọ gaghị adị oke ike ma pụta ìhè maka oke arụmọrụ ya. O nwere ihuenyo banyere 6,65 sentimita asatọ na mkpebi 1080 x 2340 pikselụ.
Google Play njikwa na-egosi na ngwaọrụ ahụ nwere 4 GB nke RAM, 128 GB nke nchekwa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ gbasaawanye ekele na oghere MicroSD. Ọ ga-abụ ngwaọrụ mkpanaka nwere njikọ 4G, na-agbakwunye njikọ Wi-Fi, Bluetooth, NFC na njikọ USB-C iji nye ụgwọ ngwa ngwa.
Ọ na-anọgide na-ahụ ma ọ na-akwanyere igwefoto esịne ke Redmi Rịba ama 9, na Redmi 10X Ọ ga-enwe ese foto anọ azụ, isi oghere nke 48 MP, nke abụọ ga-abụ 8 MP, nnukwu ihe mmetụta nke 2 MP na onye inyeaka omimi nke 2 MP. Batrị ahụ ga-abụ 5.020 mAh na 18W (ụgwọ ngwa ngwa).
Ka ekwuwapụta n’isi nso
Bọchị ịgba akwụkwọ nke ohuru Redmi 10X Ebumnuche ya iji gosipụta ya na njedebe nke Mee, mgbe ụlọ ọrụ ahụ na-ezube ịme ihe omume maka mwepụta nke ọtụtụ ekwentị na ebe a smartphone ọhụrụ a sitere na ụlọ ọrụ China ga-abata.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Edepụtara Redmi 10X na Google Play Console
Redmi ka ọ bụ Realme? Aghọtaghị m
Ezi Gerardo, ọ bụ Redmi, gbaghara ma nwee mwute.
Android 10 malitere iru na Sony Xperia 10 na Xperia 10 Plus